Tartan Kubada Cagta oo Muqdisho ka socda | KEYDMEDIA ONLINE
Tartan Kubada Cagta oo Muqdisho ka socda
Wiilal iyo Gabdho aad u fara badan ayaa galab walba u daawasho taga tartanka ciyaaraha kubada cagta degmooyinka gobolka Banaadir oo waqtigan ka socda Magaalada Muqdisho.
MUQDISHO,Soomaaliya - Tartanka Kubada Cagta degmooyinka Gobolka Banaadir, ayaa todobaadkii aynu ka soo gudubnay ka furmay gudaha Caasimadda Soomaaliya, waana mid waqtigan xiiso badan leh, islamarkaana ay u daawasho tagaan Dadka waaweyn, Dhallinyarada iyo Carruurta.
Wadooyinka Magaalada ayaad ku arkeysaa dhallinyaro xamaasad ay ka muuqato, oo xiisaha ay u qabaan ciyaarta awgeed u lugeynaya Garoomada lagu qabanayo Tartanka, waxaana qof walba uu taageero u yahay Kooxda mataleysa degmada uu ku nool yahay.
Taageerayaasha ayaa hore u soo qaata Calamada astaanta u ah Degmooyinkooda iyo durbaano ay garaacayaan inta ay Ciyaartu socoto, iyadoo aysan jirin ilaa iyo iminka wax rabshado ah oo ka dhashay Ciyaaraha socda.
Kulamada Tartankan Kubada Cagta ee degmooyinka Gobolka ayaa lagu qabtaa garoomada kala ah (Injineer Yariisow Ex-Koonis) iyo tuulada ciyaaraha ee (Staduim Muqdisho), waxaana kulamada galbihii la ciyaaro, looga sheekeystaa xilliyada habeenkii meelaha lagu caweeyo ee ay dhallinyaradu isugu yimaadaan.
Tartankan oo ah mid ay ku xifaaltamaan dhallinyarada ku nool degmooyinka Caasimaddu ka kooban tahay, ayaa sidoo kale ah is dhex gal bulsho, taasoo qeyb ka qaadan karta nabada iyo wacyiga bulshada.
Ciyaarahan ayey dhanka kale dadka caasimaddu kaga nasanayaan collaadihii dalka ka jiray 30-kii sano ee la soo dhaafay, waxana mustaqbalka laga yaabaa in ay garoomadan ka soo baxaan xidigo Soomaaliyeed oo heer ka gaara kubada cagta adduunka, qarankana guullo u horseeda.
Tartankan oo sanadkiiba mar la qabto ayaa sanadkan waxaa dheeri ku ah 17-kii degmo ee ciyaari jiray, 3 koox oo ka kala socota deegaannada ku hareereysan gobolka, waxana 3-da koox ee lagu soo daray tartanka ay kala yihiin Garasbaaleey oo ah deegaan Muqdisho kaga beegan cirifka duleedka galbeed iyo Gubadleey oo iyana caasimadda ka xigta dhanka beri iyo Daaru-Salaam oo ah deegaan dhawaan la yagleelay oo ku yaala duleedka Waqooyi ee Muqdisho.